केएमसीमा १४ दिनको नवजात शिशुको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया -
काठमाडौं । काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा १४ दिनको नवजात शिशुको जटिल एवं दुर्लभ शल्यक्रिया सफलतापूर्वक गरिएको छ । जटिल एवं दुर्लभ मानिने कनजेनिटल डायफ्रामाटिक हर्नियाको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक गरिएको हो ।
सिनामंगल, गैरीगाउँका सरस्वती तामाङले जन्माएको शिशुमा जन्मजात यस्तो हर्निया देखिएको थियो । चिकित्सकहरूका अनुसार शिशुको पेट र छातीको बीचमा हुने डायफ्राम मांसपेशीमा प्वाल थियो । पेट र छातीलाई छुट्ट्याउने पत्र (डायफ्राम)मा प्वाल परेका कारण पेटभित्र रहनुपर्ने कलेजो, आन्द्रा, आमाशय र फियो छातीमा पुगेको थियो ।
जसका कारण शिशुलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको थियो ।सामान्यतया ३७ हप्तामा बच्चा जन्मिने भए पनि सरस्वतीले ३५ हप्तामै छोरालाई जन्मदिएकी थिइन् । थापाथली अस्पतालमा ‘नर्मल डेलिभरी’ भएको सो शिशुलाई ‘रेफर’ गरेर केएमसी लगिएको थियो । केएमसीका बाल तथा नवजात शिशु सर्जन डा. आशिषलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको चिकित्सकहरूको टोलीले सफलतापूर्वक
शल्यक्रिया गरेको अस्पतालले जनाएको छ । “डायफ्राम प्वाल परेर छातीमा पुगेको कलेजो, आन्द्रा, आमाशय र फियोलाई शल्यक्रिया गरी पेटमा ल्याई प्वाल टालेका छौँ,’ डा. श्रेष्ठले भने, “यो निकै जटिल र दुर्लभ समस्या हो । अपरेसन सफल भयो, अहिले बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ ।” समय नपुगी जन्मिएको बच्चा, आमाको दूधभन्दा अन्य कुरा खुवाउँदा समस्या
हुने र बेहोस पर्दा होस खुल्न गाह्रो हुनेजस्ता करणले यस्तो शल्यक्रिया निकै जटिल हुने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एक त यो निकै जटिल अपरेसन हो, केएमसीमा हामीले पहिलोपटक यस्तो अपरेसन गरेका हौँ । त्यसमाथि पाँच हजार जिउँदो बच्चा जन्मिँदा सरदर एक जनामा मात्र यस्तो हर्निया देखिने हुनाले यो दुर्लभ केस हो ।”
यस्तो समस्या हुँदा फोक्सोको विकास क्रमलाई रोक्ने र श्वास फेर्न गाह्रो भएर बच्चाको ज्यान जाने जोखिम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । अपरेसनपछि नवजात शिशुलाई दुई हप्तासम्म अस्पतालमा राखिएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बनेपछि शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।